परराष्ट्रले बिर्सेको पोर्चुगल! :: Setopati
परराष्ट्रले बिर्सेको पोर्चुगल!
युरोप, अझ युरोपियन युनियनको पनि सेनजेन देश हो पोर्चुगल। नर्वे, स्वीडेन, जर्मनी, वेल्जीयम, डेनमार्क फिनल्यान्ड र स्वीसभन्दा आर्थिक गरिब देश हो पोर्चुगल।
आर्थिक रूपमा यो देश गरिब भए पनि आप्रवासीको लागि अन्य देशको तुलनामा कार्ड बन्ने नियम भएको युरोपकै पहिलो देश हो।
हामी नेपाली बुझेर या नबुझेर, रहर र बाध्यताले विदेशीएका हुन्छौं। कोही डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेनमा विद्यार्थी भिसामा त कोही पोल्यान्ड, माल्टा, चेक, लिथुवानीयामा वर्कर भिसामा आइरहेका हुन्छौं। कोही फ्रान्स, जर्मनी नेदरल्यान्डको भिजीट भिसामा आउँछौ। कोही कलाकारको भेसमा वेल्जीयम स्वीसलगायतका देशमा आउँछौं। नेपालबाट आउँदा गन्तव्य युरोपका अन्य छुट्टा छुट्टै भए पनि अन्त्यमा कार्ड बनाउने, परिवारलाई युरोप ल्याउनकै लागि हामी पोर्चुगल हानिन्छौं।
युरोपको जुनसुकै देशको सेनजेन भिसा छ। अझ मात्र एकै साताको भिसा भए पनि पोर्चुगल आएर यहाँको सामान्य कागजपत्र बनाई मासिक ६३५ युरो तलवमा जागिर खाइ त्यहीँ कामको आधारमा ६/९/१४/१५/१८ महिनामा कार्ड बन्छ।
जब कार्ड बन्छ अनि आफ्नो परिवार बोलाउन सजिलै मिल्छ। पहिलो वर्ष १ वर्ष, दोस्रो र तेस्रो मा २/२ वर्षको कार्ड नविकरण गरेपछि यहाँ ५ वर्षपछि पासपोर्ट अप्लाई गर्न पाईन्छ।
तुलनात्मक रूपमा युरोपका अरू देशको तुलनामा आम्दानी नभए पनि यहाँ पासपोर्ट बनाएर युके, वेल्जीयम, डेनमार्क, नर्वेलगायतका देशमा काम गर्न पाईने भएकाले पासपोर्टकै लागि यहाँ नेपाली, बंगाली, भारतीय, पाकिस्तानीसहित एसियन र अफ्रीकी मुलुकका मान्छेको आगमन बढ्दो छ।
कृषि र पर्यटक यहाँको आम्दाका मुख्य स्रोत हुन्। शान्त देश पोर्चुगलको धेरै कुरा नेपालसँग मिल्छ। हावा पानी झन्डै झन्डै नेपाल कै जस्तो छ।
यहाँ आउन र काम गर्नका लागि केही मेडिकल चेक गर्नुपर्दैन। कुनै उमेर र योग्यताको सीमा छैन। त्यसैले नेपालबाट १९ वर्षका कलिला युवादेखि ४९ वर्षका पाका दाजु भाइ अनि विद्यार्थीदेखि शिक्षक तथा रिटायर्ड राष्ट्रसेवक प्रायः सवैको गन्तव्य पोर्चुगल भएको छ।
परिवार को एक सदस्य यहाँ आएर कार्ड बन्यो भने श्रीमान/श्रीमती छोरा छोरी जो १८ वर्ष नाघेका छैनन् अनि वावु आमालाई सजिलै ल्याउन मिल्ने भएको र पासपोर्ट पायपछि आफूले रोजेको देशमा परिवारसहित जान पाउने भएकाले पनि पोर्चुगल सबैको रोजाईमा पहिलो नम्बर पर्छ।
२ दशकभन्दा शढी समयदेखि नेपाली बसोवास गर्दै आएको पोर्चुगलमा अहिले दैनिक नेपालीको आगमन बढिरहेको छ।
पोर्चुगलमा नेपालीको संख्या २५ हजार भन्दा बढी छ आउँदो २ वर्षमा यो संख्या दोब्बर हुने पक्का छ। युकेपछि सवैभन्दा बढी नेपाली भएको युरोपियन देश पोर्चुगल हो।
जति जति संख्या वढी हुन्छ ,तेती तेती समस्या अफटेरो हरु वढेको हुन्छन् । नेपाली को संख्या वढे सगै यहा समस्या पनि वढेको वढ्यै छन् । नेपाली लाई विभीन्न कानुनी कागजपत्र को लागी अत्यन्तै समस्या पर्दै गयको छ ।
पोर्चुगलको छिमेकी देश स्पेनमा नेपाली राजदूतावास छ तर यी दुई देशको कुटनीतिक नीतिका कारण पोर्चुगललाई फ्रान्सको दूतावासले हेर्छ, फ्रान्स पोर्चुगलबाट अलिक टाढा छ। यहाँ अवैतानिक कन्सुलर त छ तर समय र नेपालीको चापसँगै यहाँ राजदूतावासको अत्यन्त खाँचो छ।
विडम्वना यहाँ राजदूत चाहिन्छ भनेर कसैले बोल्यो भने त्यो नेपालीले पोर्चुगलमा कि कुटाई खान्छ कि ऊ विरूद्ध नानाथरी गरिन्छ। एनआरएनएलगायत ४०भन्दा बढी संघ संस्था छन्। यहाँ राजदूतावासको लागि कसैले चु सम्म बोल्दैनन्। सर्वसाधारण भर्खर आएको नेपालीले बोलेको कुरा न कसैले सुन्छन् न कसैले उनीहरूको पीडा बाहिर ल्याईदिन्छन्।
केही समय पहिला परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पोर्चुगल आउनु भएको थियो। उहाँले सिधै भन्नुभयो, ‘पोर्चुगलमा राजदूतावास आउँदैन।’
त्यतीबेला हामी निरास भयौं। के साच्चै परराष्ट्रले पोर्चुगलका नेपाली नदेखेकै हो त? कि पोर्चुगलका संघ संस्था पदाधीकारी आषण र भाषणमै सिमीत भए?
हामी भन्छौं, ‘राजदूतावासको काम फाईदा गर्नको लागि र अनुदान दिने देशमा अनुदान र सहयोगका लागि मात्र पक्कै स्थापना हुने होइन होला। आफ्ना नागरिकलाई सहयोग र राहतको लागि पनि विदेशमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ।
पोर्चुगलका हरेक नेपालीले आफ्नो कागज पत्रलाई ट्रान्सलेट गर्दा नेपाली कन्सुलरमा ७ देखि १० युरो एउटा कागजपत्र ट्रान्सलेट गरेको शुल्क तिर्छन्। नोटरीमा १० देखि २५ युरोसम्म तिरिरहेका हुन्छन्।
यसरी हिसाव गर्ने हो भने पनि नेपालीकै राजश्वले यहाँको दूतावास खर्च गज्जबले धान्छ। नेपाली दूतावास पोर्चुगलमा नल्याउन चाहने नेपालीकै सानो झुन्ड नभएको होईन। तिनै झुन्डको आवाजले यहाँको २५औं हजारको आवाजलाई पछिपारिरहेको छ। यो माननीय परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिवज्यूले पक्कै पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासमा छौं।
विडम्वना, परराष्ट्रले पोर्चुगल नदेखेको हो कि, पोर्चुगलका नेपाली दलीय भातृ संगठनका नेताले यहाँको समस्या नेपाल पुर्‍याउन नसकेका हुन्। या परराष्ट्रबाट पोर्चुगल भ्रमण मा आउने नेपालीको गुनासो नसुनेका हुन् त्यो उहीहरूनै जानुन्।
अन्त्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नदेखेको पोर्चुगल एक पटक देख्ने प्रयास गरोस्। पोर्चुगलमा भएका २/४ जना दल निकट व्यक्तिको कुरा नसुनोस् यहाँको वास्तविकता बुझोस्।
नेपाल सरकार र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीले दुतावास नहुँदा पाएको समस्या र अफ्ठेरो गम्भीर रूममा अध्ययन गरि राजदूतावासको पहल गरियोस्र
यो कार्यले सरकारको लोकप्रियता बढ्नुका साथै पोर्चुगलका नेपाली जनताले सेवा र सुविधा पाउनेछन्।
परराष्ट्रले पोर्चुगल र पोर्चुगलका नेपाली देख्ने प्रयास गरोस्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७, ०१:०२:००